Umgaqo-nkqubo woMgangatho, uMnqophiso kunye neMithetho-siseko yaseShanghai Chigong Industrial Co., Ltd.
Umgangatho yinxalenye ebalulekileyo yenjongo yethu kunye nemilinganiselo yeshishini elingundoqo.Ezi zikhokela izenzo zethu zokuqinisekisa ukuba sinikezela ngezona mveliso zikumgangatho ophezulu ukwanelisa iimfuno zabathengi bethu.Umgaqo-nkqubo wethu womgangatho uqulathe uMnqophiso wethu, iiNqobo ezisemgangathweni kunye nokuZibophelela kuPhuculo oluQhubekayo.
Ukwenza ikhonkco ngalinye lekhonkco lethu lamandla afanelekileyo okuphatha imithwalo kunye nemithwalo.
Ubudlelwane obunentlonipho nobuxatyisiweyo
Sihlala sizabalazela ukwakha ubudlelwane obuthembekileyo, obuzinzileyo nabantu bethu, abathengi, kunye nababoneleli kuba ezi zibalulekile kwimpumelelo yethu yexesha elide.
Sikholelwa kwintsebenziswano namaqela awomeleleyo ukuhambisa iziphumo ezifanelekileyo.
Ukuxhotyiswa kunye noxanduva
Siya kuthi gqolo ukuqhubela phambili igunya lokuphendula kuwo onke amanqanaba ombutho ukuze sifezekise iinjongo zethu zoshishino.
Ukunyaniseka okupheleleyo kunye nokunyaniseka okuphezulu
Siziphatha ngengqibelelo ngamaxesha onke.
Ukugqwesa ekusebenzeni ngophuculo oluqhubekayo
Ekugqibeleni siya kufezekisa iziphumo zethu zemali kwaye sakhe abathengi abathembekileyo ngokusebenza okuphezulu kuyo yonke inkalo yeshishini lethu.
Njengomqeshi wasekhaya, iSCIC izibophelele ekubuyiseleni kuluntu.
UKUZINIKELA EKUPHUCULWENI NGOKUQHUBEKAYO
I-SCIC izibophelele ekubeni ngumenzi wehlabathi othenjiweyo ohamba phambili kunye nomthengisi wamatyathanga entsimbi angqukuva ngokwenza utyalo-mali kubantu bethu kunye neenkqubo ukuze kunikezelwe ngokugqibeleleyo ukulingana komgangatho, ukuthembeka, kunye nexabiso elihlangabezana neemfuno zabathengi bethu.
Ukuzalisekisa umnqweno wethu wokuba yinkokeli eyaziwayo yoshishino, sizibophelele ekuqhubeni siphucula oku kulandelayo ukuze sifezekise ubizo lwethu:
Sigxininisa kwisicwangciso sobuchule sokuqinisekisa ukuba iNkqubo yoLawulo loMgangatho igcinwa ngokupheleleyo kwaye iinjongo ezisemgangathweni zisekwe kulo lonke umbutho kwezo nkqubo zichaphazela imveliso eyenziwayo.Ezi njongo ziyalinganiseka kwaye ziyahambelana neenjongo zethu zokusoloko siphucula umgangatho weemveliso zethu.
Sityala imali kuphuhliso lwabasebenzi bethu ukukhuthaza nokukhuthaza intatho-nxaxheba yabasebenzi kunye nokuzibandakanya kulo lonke umbutho.Le yinto ebalulekileyo yokugcina imigangatho yethu yomgangatho ophezulu.
Sisoloko sizama ukuphucula iinkqubo zethu ngemithetho-siseko yokuvelisa ebhityileyo.
Sityala imali kwi-automation yomatshini apho kunokwenzeka ukunciphisa ukwahluka, iziphene, kunye nenkunkuma.
Sigxininisa ekwakheni ubudlelwane obuluqilima kunye nozinzileyo kunye nababoneleli ukuqinisekisa ukuba iimveliso zethu zenziwe ngezona zinto zisemgangathweni ophezulu.
Siqinisekisa ukuba iziseko zethu kunye nezixhobo zigcinwa kakuhle, ezibonelela ngendawo yokusebenza ekhuselekileyo, engenacalucalulo ekhuthaza kwaye ikhuthaze ukuthatha inxaxheba kunye nokuzibandakanya kulo lonke umbutho.